नवाज सरिफको स्वास्थ्यप्रति डाक्टरहरू सन्तुष्ट छैनन् - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
एजेन्सी । पाकिस्तानको लाहोरस्थित सर्भिस अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सलीम शहजाद चीमाले पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरीफको स्वास्थ्य अवस्था सन्तोषजनक नरहेको जनाएका छन् । उनले शनिबार सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री सरिफको प्लेटलेटस् सामान्य तहमा बढ्न सकेको छैन। डा. चिमाले भने- पूर्व प्रधानमन्त्री सरिफ मेडिकल रुपमा भने अयोग्य छैनन् ।”
पूर्व प्रधानमन्त्री सरिफलाई स्वास्थ्य अवस्थामा खराबी आउनासाथ जेलबाट सर्भिस अस्पतालमा उपचारको निम्ति पुर्याइएको थियो । उनको मुटुमा ठूलो समस्या देखिएपछी जेल प्रशाशनले अस्पताल रिफर गरेको थियो । उपचारको क्रममा स्वास्थ्य अवस्था सन्तोषजनक नरहेको संकेत गर्दै डा. चिमाले भने- “नवाजलाई हिंड्नको लागि भनिएको थियो तर उनले थाहा पाए कि उनि यात्रा गर्न सक्षम छैनन् ।”
अन्य चिकित्सकहरुको भनाइ छ कि पूर्व प्रधानमन्त्रीको अवस्था राम्रो छैन त्यसैले उनी अस्पतालमा नै छन् ।डा. चिमाले थप्दै भने, ” यदि नवाज शरीफ अस्पताल छोड्न चाहन्छन् भने हामीसँग अनुरोध गर्न सक्दछन्।”